Sawirro: Maxaad ka taqaanaa markabka dalxiis ee ugu balaaran caalamka? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
23rd October 2014 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Markabka dalxiis ee ballaaran dunida waxaa lagu magacaabaa “Oasis of the Seas”, wuxuu dhirir ahaan xagga jiifka gaarayaa 362 mitir oo wuxuu ka dheeryahay dhismaha ugu dheer qaaradda Yurub, balaciisuna waa 65 mitir oo wuxuu ka balac weynyahay 5 diyaaradood oo ah nuuca Boeing 747.
Miisaanka Markabkan ayaa ah 225 kun oo tan, halka dhirirkiisa xagga sare uu gaarayo 1187 feet ama cag. Markabkaan ayaa qaadi kara rakaab dhan 6,318 ruux, waxaana ka shaqeeya 2394 qof, wuxuuna leeyahay 24 goobood oo isugu jira baarar iyo meelo kafeega laga cabo.
Sidoo kale, wuxuu markabkaan leeyahay goobo ganacsi oo gaaraya 3050 mitir oo isku wareeg ah, sida ay qortay Jariidada Alcarab ee kasoo baxda dalka Qadar.
Markabka Oasis of the Seas ayaa leh Tiyaatar ay fariisan karaan 750 oo qof, sidoo kale waxaa markaabkaan ku dul yaala labo garoon oo lagu ciyaaro golf iyo basketball iyo hoteelo iyo xarumo kale oo dalxiis.
Waxaa sidoo kale markabkaan ku yaala barkado lagu dabaasho iyo beer dhir badan oo ay ku yaalaan ilaa 12 kun nuuc oo dhir ah. Waxaa iska leh markabkaas shirkad lagu magacaabo “Royal Caribbean”, waxaana dhismihiisa dalka Finland laga bilaabay danadkii 2006, wuxuuna shaqo bilaabay sanadkii 2009.
Markabka “Oasis of the Seas” oo bartamihii bishaan ku xirtay dekeda “Southampton” ee dalka Britain, isagoo kusii jeeda dalka Mareykanka oo uu ku tegayo safar dheer.